प्रदेश आयुर्वेद औषधालयले योग हललाई नै आइसोलेसन कक्षमा रुपान्तरण गर्ने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्णाली प्रदेश ∕ प्रदेश आयुर्वेद औषधालयले योग हललाई नै आइसोलेसन कक्षमा रुपान्तरण गर्ने
प्रदेश आयुर्वेद औषधालयले योग हललाई नै आइसोलेसन कक्षमा रुपान्तरण गर्ने
चन्द्रा कँडेल शुक्रबार, २०७८ वैशाख २४ गते, १५:५८ मा प्रकाशित
सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतले योग हललाई नै आइसोलेसन कक्षमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतले योग हललाई नै कोभिड आइसोलेसन कक्षमा रुपान्तरण गर्न लागेको हो ।
प्रदेशमै पहिलो पटक प्राकृतिक वातावरणसहितको आइसोलेसन कक्ष संचालनमा ल्याउन लागिएको औषधालयका प्रमुख डा. शंकरप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
औषधालयले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट तीव्र रुपमा फैलिन थालेपछि संक्रमितलाई उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि योग हललाई नै आइसोलेसन कक्षका रुपमा संचालनमा ल्याउन लागेको डा. रिजालले बताए ।
उक्त हलमा २५ शैय्याकोे कोभिड आइसोलेसन हुनेछ । आवश्यकता परे २५ शैय्याको कोभिड आइसोलेसन कक्षलाई बढाएर ५० शैय्यासम्म पु¥याउने योजना रहेको उनले बताए । आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितलाई प्राकृतिक तवरबाटै उपचार गरिनेछ ।
कोभिड आइसोलेसन कक्ष संचालनमा आएपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिसँगै विहान बेलुका गायत्री मन्त्र, योग, ध्यान, एवं जीवन जिउने कलाका विषयमा कक्षा दिइनेछ । यसका साथै स्वस्थ खानपान, व्यायामजस्ता क्रियाकलाप समेत सिकाइनेछ ।
अहिले अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने कोभिडका बिरामीलाई कोभिड कक्षमा प्राकृतिक वातावरण मिलाइएको छ । .अक्सिजनसहितको आइसोलेसनका लागि पनि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।